ယခုအပတ် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် ၅ ခု - Matrix Trilogy နှင့်အခြားအရာများ - Netflix ရုပ်ရှင်
ယခုအပတ် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် ၅ ခု - Matrix Trilogy နှင့်အခြားအရာများ
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် - အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်။ ။ (L-R) သရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော Keanu Reeves၊ Laurence Fishburne၊ Nona Gaye နှင့် Harold Perrineau တို့သည် California ရှိ Los Angeles ရှိ Walt Disney Concert Hall တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ တွင်ရုပ်ရှင်ပြသသည့် Matrix Revolutions တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Vince Bucci / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Pretty Little Liars ရာသီ 7B သည် Netflix တွင်စီးဆင်းနေသည် Marvel ရဲ့ The Defenders နှင့်သြဂုတ်လ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix အပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ 10 အကောင်းဆုံးပြပွဲ
The Matrix၊ ဂျက်ကီဘရောင်းနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်ယခုအပတ် (ဇူလိုင် ၃၀ မှသြဂုတ်လ ၆ ရက်) Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်ကောင်းများစာရင်း။
ဇူလိုင် ၃၀ မှသြဂုတ်လ ၆ ရက်အထိ Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခဲ့သည် Matrix Trilogy ပာ နှင့်ပိုပြီး! ရုပ်ရှင်အတော်များများသည်သြဂုတ်လတွင်ထွက်ရှိမည့် Netflix အသစ်၏စာရင်းမှလာသည်။
ယခုအပတ် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောရုပ်ရှင်၏ယခုအပတ်စာရင်း Netflix ကမူရင်းစီးရီးအနည်းငယ်လည်စည်း -ins ရှိသည် Sense8 ။ အဆိုပါ Wachowskis ၏ Co- ဖန်တီးသူ Sense8, စာရင်းအပေါ်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုရေးသားခဲ့သည်နှင့်ညွှန်ကြားကြပြီ!
ရာသီ3ထွက်လာမယ့်အခါ
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောရုပ်ရှင်စာရင်း။
Matrix Trilogy ပာ
Matrix Trilogy ပာ သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင် Netflix သို့လာမယ့်! Wachowskis မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်။ Matrix စိတ် - ကွေး, သိပ္ပံဝတ္ထုသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်ပါတယ်။
Keanu Reeves သည် Neo ပရိုဂရမ်မာတစ် ဦး အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ၏အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိလာသည်မှာအရာအားလုံးမဟုတ်ပါ။ Laurence Fishburne၊ Carrie-Anne Moss၊ Joe Pantoliano နှင့် Hugo Weaving တို့သည်လည်းရုပ်ရှင်များတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်။
ငါလူအများစုမြင်ကြပြီထင်ပါတယ် အဆိုပါ Matrix, သိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြိုက်ရင်ဒီရုပ်ရှင်တွေဟာပြန်လည်ကြည့်ရှုဖို့ကောင်းပါတယ်။ Matrix ရုပ်ရှင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်များမှာ!
လက်ပတ်နာရီကိုသင်တဦးတည်း MTV များမှာ
Johnny Depp နှင့် Charlize Theron သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်ပြဇာတ်ရုံများတွင်ပြသခဲ့သည်။
အာကာသယာဉ်မှူး၏ဇနီး ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ box Office ရဲမှာကြီးမားတဲ့လာသောသေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်တွင်အားနည်းချက်များရှိသော်လည်းအထူးသဖြင့် Depp နှင့် Theron တို့မှဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများစွာကိုပြသထားသည်။ နှင့်အညီ, ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်လမ်းအတွက်ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါကဒီအချိန်မတိုင်မီဒီရုပ်ရှင်ထိတွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့က Netflix ရှိရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ။
ပိုများသော netflix:Netflix မှအကောင်းဆုံးသိပ္ပံဝတ္ထု ၅၀
Dope Netflix မှထွက်ခွာသည်! ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုငါတို့ပဲသိလိုက်ရတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာဒီရုပ်ရှင်ကို streaming service ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်မှာပါ။ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့ခဏနေသေးပေမယ့်မင်းတို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အသိပေးချင်တယ်။
Dope Shameik Moore၊ Tony Revolori နှင့် Kiersey Clemons တို့ပါဝင်သည်။ Inglewood တွင်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်သုံး ဦး အားသူတို့၏ကျောပိုးအိတ်ထဲ၌မူးယစ်ဆေးဝါးများတွေ့ရှိပြီးကျောက်တုံးများနှင့်ခဲယဉ်းသောနေရာများကြားတွင်ရှိနေသောသူတို့နှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုသည်။
ဒါက Netflix မှာကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ တတ်နိုင်သမျှစောင့်ကြည့်ပါ။
Cloud Atlas Netflix သို့သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်လာရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်ဒေးဗစ်မစ်ချဲလ်ရေးသားသည့်စာအုပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ Wachowskis Tom Tykwer နှင့်အတူရုပ်ရှင်ပူးတွဲညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါသုံးလည်းရုပ်ရှင်များအတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်။
Cloud Atlas Tom Hanks၊ Halle Barry၊ Hugh Grant၊ Susan Sarandon, Jim Broadbent, Hugo Weaving, James D'Arcy နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်သရုပ်ဆောင်ထားသောသရုပ်ဆောင်များတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Netflix ၏မူရင်း Doona Bae Sense8 ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သရုပ်ဆောင်။
အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိတဲ့ Sci-Fi ရုပ်ရှင်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ Cloud Skip s ကိုယခုအပတ် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အစိုင်အခဲရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
Quentin Tarantino မှရေးသားပြီးညွှန်ကြားခဲ့သည်၊ ဂျက်ကီဘရောင်း စာအုပ်အပေါ်အခြေခံသည် Rum Punch Elmore Leonard မှရေးသားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Pam Grier သည်ဂျက်ကီဘရောင်း၊ မှောင်ခိုစက်ဝိုင်းတွင်ဖမ်းမိသောလေယာဉ်မယ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။
ဂျက်ကီဘရောင်း Netflix တွင်လွှင့်ထုတ်မည့် Tarantino ရုပ်ရှင်ကားများသာဖြစ်သည် မသိသော Basterds ။ Tarantino ရုပ်ရှင်ကားများစီး ၀ င်နိုင်သော်လည်းယခင်ကထိုရုပ်ရှင်များကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ မျှော်လင့်ပါတယ် ဂျက်ကီဘရောင်း ပြန်လာသောကြောင့် Tarantino စာကြည့်တိုက်၏ကျန် Netflix သို့ပြန်လာသည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဂျက်ကီဘရောင်း သြဂုတ်လ 1 ရက်နေ့တွင် streaming လိမ့်မည်။
hulu အပေါ် Simpsons ဖြစ်ကြသည်
netflix အပေါ်ဒိုင်းလွှားရာသီ6၏အေးဂျင့်
netflix 2017 ထွက်ခွာ Bob ရဲ့ဘာဂါ
ဘယ်အချိန်မှာ rick နှင့် morty ပါဘူး